महोत्तरीको बर्दिवास एक साताका लागि 'लकडाउन' - The Public Today
महोत्तरीको बर्दिवास एक साताका लागि ‘लकडाउन’
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १६:२१
बर्दिवास, साउन २१ गते । महोत्तरीको बर्दिवास एक साताका लागि लकडाउन गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बर्दिवासमा बसेको सर्वपक्षिय बैठकले बर्दिवास नगरपालिका वडा नं १, २ र १४ मा एकसाताका लागि बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बर्दिवास नगरपालिका वडा नं–१ मा पनि संक्रमित फेला परेपछि बर्दिबासमा वडा नं.१ का वडा अध्यक्ष चुडामणि पोखरेल, २ का वडा अध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेल, वडा नं.१४ वडा अध्यक्ष भरत हमाल, उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिबासका अध्यक्ष प्रल्हाद क्षेत्री, होटल व्यवसायी संघ महोत्तरीका महासचिव रेवन्त कार्की सुदिप लगायतका प्रतिनिधीको समेतको सहभागितामा बसेको वैठकले बर्दिबास नगरपालिका वडा नं.१,२, र १४ क्षेत्रभित्र साउन २१ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी साउन २८ गते राति १२ बजे सम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण फैलन कम गर्ने उद्देश्यले बर्दिबास नगरपालिका वडा नं.१,२ र १४ भित्र लकडाउन गरीएको वडा नं.१ का वडा अध्यक्ष चुडामणि पोखरेलले जानकारी दिए । बन्दाबन्दी अवधि भित्र अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट ननिस्कन अनुरोध गरिएको छ । यस अवधिमा अस्पताल, औषधी पसल, दमकल, एम्बुलेन्स, संचार सेवा लगायत अत्यावश्यक सेवा मात्र खुल्ला हुने होटल व्यवसायी संघ महोत्तरी महासचिव रेवन्त कार्की सुदिपले जनाए ।
सर्वंपक्षिय वैठकको निर्णय सहितको पत्र इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा पठाइएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख सन्देश मास्केका अनुसार वडाबाट आएको सो पत्र जानकारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी पठाइएको हो ।
यस्तै बर्दिबास उद्योग वाणिज्य संघले पनि आफ्ना मातहतका सम्पुर्ण व्यवसायीहरुलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताइएको छ । उद्योग वाणिज्य संघले आजै माइकिङ गरी सूचना सम्प्रेषण गरेको होटल व्यवसायी संघ महोत्तरी महासचिव कार्कीले बताए ।
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भारइसको संक्रमण बर्दिबास नगरपालिका वडा नं. १ मा पनि देखा परेको छ । बर्दिबास नगरपालिका वडा नं.१ निवासी ६५ वर्षिय एक महिलालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । विरामी महिलाको बर्दिबास जनसेवा हस्पिटल प्रा.लि.मा उपचार गरिएको थियो । हस्पिटलका अनुसार साउन १९ गते राति विरामी आकस्मिक उपचारकै क्रममा रेफर भई गएको र २० गते साँझ पिसिआर को रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । विरामीको उपचारमा संलग्न अस्पतालका सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई आइसोलेसनमा राखिएको वताइएको छ । साथै अस्पतालको आकस्मिक बाहेक नियमित कार्य सम्पादन स्थगित गरिएको बर्दिबास जनसेवा हस्पीटल प्रा.लि. बर्दिबासका अध्यक्ष सुमन भुजेलले जानकारी दिए ।
यता बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख विदुर कुमार कार्कीले भने आधिकारिक पत्र आइ नसकेकोले नगरपालिकाले यस विषयमा निर्णय नगरेको बताए । उनले आफुलाई आधिकारिक पत्र प्राप्त हुने वित्तिकै तुरुन्तै सम्पुर्ण सरोकारवाला व्यक्तीहरुसंग वैठक वसि आगामि योजनाको विषयमा निर्णय गरिने छ । विशेष गरि सम्पुर्ण नगरवासीलाई अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन, मास्कको प्रयोग गर्न, भिडभाड नगर्न , भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गरी काम गर्न अनुरोध गरिएको छ ।